Global Voices teny Malagasy » EWAMT: Ny hazavana ao anaty haizina – Ireo vehivavy bilaogera ao Yemen · Global Voices teny Malagasy » Print
EWAMT: Ny hazavana ao anaty haizina – Ireo vehivavy bilaogera ao Yemen
Voadika ny 29 Jolay 2018 3:59 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Liva Andriamanantena
(Marihina fa tamin'ny 3 Janoary 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nisarika betsaka ny sain'ny fampitam-baovao i Abdul Farouk Umar Abdulmutallab, Nizeriana 23 taona manana fiaviana Arabo Yemenita, noho ny fikasany hanapoaka baomba tamin'ny zotra iray mankany Etazonia . Nanafintohina ny fanambarana iray hafa nahatohina ny fiampangana an'i Abdulmutallab satria ny AL-Qaeda no nampiofana azy tao Yemen ary mbola nisy maro hafa tao Yemen izay nikasa ny hanapoaka ireo fiaramanidina Amerikana.
Feno ireo vaovao rehetra ireo ny fampitam-baovao mahazatra niaraka tamin'ny karazana fiheveran-diso saingy tsy dia nilaza firy momba ny eritreretry ny vahoaka ao Yemen izy ireo. Tsy dia maro ny fomba ahafahana manao izany.
Niaraka tamin'ny fanampian'ny Rising Voices, mampianatra ny famahanana bilaogy ho an'ireo vehivavy mpanao politika, mpikatroka, ary mpiasa mpiaro ny zon'olombelona ao Yemen mba hitondrana azy ireo eo amin'ny fifanakalozan-kevitra manerantany ny tetikasa ‘Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media’  (EWAMT).
Mpikatroka vehivavy ao Yemen – Atrikasa faha-8. Novambra 2009
Eto isika dia hijery ny sasany tamin'ireo lahatsoratry ny mpandray anjara :
Naniry izany tao anaty tononkalo  i Aisha ao amin'ny Life Blog :
Mamerimberina indray aho milaza fa tokony ho tsara fanahy amin'ireo zanatsika isika ..
Ary omena ny zony rehetra izy ireo ..
Satria ny zavatra miandry azy ireo aorian'ny taona vitsy .. dia fangirifiriana no tsara indrindra..
Nanoratra  momba ny fampijaliana ny ankizy ary nandrisika ireo mpamaky tao amin'ny lahatsorany i Drew drops.
Niresaka momba ny fifandraisan'ny Tatsinanana-Tandrefana  i Kholoud ao amin'ny Ambitious Project. Nanontany tena momba ny ezak'ireo firenena Tandrefana sasany amin'ny fandraràna ny fiparitahan'ny nokleary any Afovoany Atsinanana ilay bilaogera, ireo firenena ireo kosa anefa dia tsy mbola nanomboka nandrara ny azy ireo mba ho marindanja ny tantana.
Nanoratra  momba ny fianarany sy ny fiainany ary namerina izany indray tamin'ny alàlan'ny asa i Abeer Aeriqi.
Ireto  misy lisitry ny bilaogy maromaro tsara arahina.
Ny Alakamisy faha-12 Novambra 2009 dia nisy ny atrikasa fahavalo natao niaraka tamin'ny mpiofana miisa 12. Nampahafantatra  ny lehiben'ny tetikasa Ghaida'a Al Absi hoe :
Niresaka momba ny lohahevitra sasany toy ny fahalalaham-pitenenana, ny fanorisorenana ara-nofo ao Yemen izahay tamin'ny fiafaran'ny atrikasa. Saropady ho an'ny governemanta ny firesahana momba ny fahalalaham-pitenenana ao Yemen, noho izany dia niresaka momba izany tao anatin'ny tahotra mety isian'ireo mpitsikilo izahay.
Mpikatroka Yemenita nifanakalo hevitra
Hoy i Ghaida'a: “Toy ny labozia miaraka amin'ny labozia maro hafa ny tetikasa EWAMT, izay manome hazavana ny haizina ao Yemen.” Manantena izahay fa hanjavona tsy ho ela ny haizina amin'ny fisian'ny bilaogy maro kokoa sy ny fifanakalozan-kevitra bebe kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/29/123627/
 fikasany hanapoaka baomba tamin'ny zotra iray mankany Etazonia: http://www.standpointmag.co.uk/node/2586
 izany tao anaty tononkalo: http://translate.google.com/translate?u=http://powergladulise.blogspot.com/&hl=en&langpair=auto|en&tbb=1&ie=UTF-8
 fifandraisan'ny Tatsinanana-Tandrefana: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&langpair=auto%7Cen&u=http://kholoudambition.blogspot.com/2009/12/blog-post.html&tbb=1&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhjS33PWU6A5dAuFyQh3VBxKSPvO5w